अनमोल र उपासनाको ‘क्याप्टेन’ युटुबमा सार्वजनिक
सुचना डबली डेस्क / २०७७, २० मंसिर शनिबार १२:१४ प्रकाशीत
काठमाडौं, मंसिर २० । नायक अनमोल केसी अभिनित चलचित्र ‘क्याप्टेन’ युटुबमा रिलिज गरिएको छ । चलचित्र ‘क्याप्टेन’लाई दीवाकर भट्टराईले निर्देशन गरेका हुन्। चलचित्र ओएसआर डिजिटलको अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
अभिनेता अनमोल केसीलाई पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रमा लगानी उठाउने कलाकारको रुपमा हेर्ने गरिन्छ। सुपर काजल फिल्मसको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रलाई सदावहार अभिनेता भुवन केसीले निर्माण गरेका हुन् भने चलचित्रको कार्यकारी निर्माता जिया केसी हुन्।
यो चलचित्र करिब २ बर्ष अगाडि हलमा रिलिज भएको थियो । हलमा औषत व्यापार गरेको यो चलचित्रले युटुबमा राम्रो दर्शक पाइरहेको छ । सार्वजनिक भएको ४ घन्टामा १ लाख भन्दा बढी भ्यूज पाएको चलचित्रलाई दर्शकले रुचाएका छन् ।
चलचित्रमा अनमोल केसी, उपासना सिंह ठकुरी, प्रियंका एमभी, सुनिल थापा, सरोज खनाल, विल्सन विक्रम राई, प्रशान्त ताम्राकार लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
फुटबलको कथालाई उठान गरेको यो चलचित्रमा नायक अनमोल केसी फुटबलरको भूमिकामा देखिएका छन् ।
मिसेज ग्राण्ड इन्टरनेशनल नेपालको उपाधि उर्मीलालाई
चलचित्र ‘चपली हाइट ३’ पुस ३० मा रिलिज हुँदै
अभिनेत्री वर्षाले दिइन् पत्रकार प्रकाशविरुद्ध उजुरी
२. ह्वात्तै बढ्यो कोरोना, एकैदिन ३ हजार ७५ जना थपिए
३. पाथिभरा माताको दर्शन गर्दै, तपाईँको आजको राशिफल